Iisampulu zasimahla zeClinque Makeup - Izinto Zokuthambisa Brands
Iisampulu zasimahla zeClinque Makeup
Awusoloko uyazi kwangoko ukuba imveliso onomdla kuyo iya kuba yingcwele oyifunayo okanye enye nje ibhotile ephoswe ngasemva kwidrowa yokuzisola ngokwenza. Kulapho iisampulu zasimahla zingena khona. Nangona iikhawuntari zeClinque zihlala zinemigaqo-nkqubo efanelekileyo yokubuya, ukuthatha isampulu okanye ezimbini ngelixa sele ulapho kuya kukugcinela uhambo oluya kwikhawuntara ukuba uthatha isigqibo sokuba into ayikusebenzelanga.
Ukufumana phi iisampulu zasimahla
Kukho iindlela zokuzama into oyithandayo, akukho imitya iqhotyoshelweyo, ukuba nje yinto enokwenziwa ibe sisampulu okanye into enikezelwa njengesipho ngokuthenga xa uthenga into osele uyazi ukuba uyayithanda. Kwiimeko ezininzi, kuya kufuneka uye evenkileni ukuze ufumane iisampulu zasimahla. Kwezinye iimeko, nangona kunjalo, kunokubakho iisampulu zasimahla ezikhoyo kwi-Intanethi. Awunakuthetha kakhulu ukuba zeziphi ozama kuzo, kodwa ukuba uthanda umgca kwaye wonwabele iimveliso ezintsha abazikhuphileyo, inokuba yile nto uyikhangelayo.
Inyathelo ngenyathelo wamehlo Makeup Ifoto eyiTutorial
Imifanekiso yeBrown Eyes yeMifanekiso
Igalari yeDrama yeeFoto
Izinto zokubala zeClinque
Iivenkile zesebe eziphethe i-Clinique makeup zinokunika iisampulu. Ukuba awuqinisekanga ngomthunzi wakho wesiseko okanye ifomula, umzekelo, cela nje ezimbalwa ukuba uzame ukuzithelekisa kwiintsuku ezimbalwa ezizayo. Oku kukugcinela ingxaki yokuthenga ibhotile epheleleyo yomthunzi ongalunganga okanye ifomula engasebenziyo kunye nohlobo lwakho lolusu njengoko bekulindelwe. Uyakwazi ukuxelela ukuba umbala uyakudibanisa ngaphezulu kweeyure ezininzi okanye uhlala umdlalo ofanelekileyo.
Ungayihla njani keurig ngeviniga
I-Clinique Pop Lip Umbala kunye nePrimer kwiPlum Pop kunye noKonwabela iMini Mini
Cinga ukuthetha-thethana ngokukhululekileyo kwikhawuntara yeClinque ukufumana iimveliso oza kuzithanda. Kuba ayizizo zonke iimveliso ezilula ukwenza iisampulu ezivela (eyeliners kunye neemascaras, umzekelo), le yenye indlela yokunika ukujonga okutsha kuvavanyo lokuqhuba losuku ukubona into oyenzayo okanye ongayithandiyo, kwaye unokufuna ukuqaphela ukongeza kwingqokelela yakho yobuso.
Zama i-Belk, i-Macy, i-Nordstrom, i-Dillard, i-Bloomingdale, i-Boscov, i-Saks, i-Neiman Marcus kunye ne-Lord & Taylor. Aba bathengisi, kunye neClinque.com, banokunikezela ngesimahla, iisampulu ezinobungakanani besandla somlomo, izithunzi, iziseko, kunye nokunye njengezipho ngokuthenga unyaka wonke ngexesha leebhonasi zeClinque. Uluhlu lwamaxesha ebhonasi, jonga Clinique-Bonus.com .
USephora udume ngesisa sabo ngeesampulu. Into ekufuneka uyenzile kukubuza. Unokufumana umthunzi kwaye ugqibezele iingcebiso, kunye neengcebiso zemveliso zezinto onokuthi ungakhange uziqwalasele okwangoku ezinokusebenza kakuhle ngento ofuna ukuyizama. Ngamanye amaxesha, uya kuba nakho ukufumana iisampulu ze-Deluxe ze-Clinique makeup kunye nokuthengwa kwemveliso eSephora okanye eSephora Ngaphakathi kweJCPenney kwi-Intanethi ngokunjalo, kuxhomekeke kwinto abayibonisayo ngelo xesha. Ivenkile, akukho nto ithengiweyo iyimfuneko.
ungayifumana kanjani intombi kwisikolo esiphakathi
USephora Ngaphakathi JCPenney
Ukuba awunayo ivenkile epheleleyo yeSephora kufutshane, jonga iJCPenney yakho. Ezinye iindawo zineevenkile zeSephora ngaphakathi, kwaye ungafumana iisampulu zasimahla apho njengoko unakho kwivenkile ezimeleyo.
Yiya kwiminyhadala yeCliniki
Yiba ngowokuqala emgceni ukuzama iimveliso ezintsha kwaye ufumane iisampulu kwiminyhadala ekhethekileyo kwivenkile yakho yendawo xa ubhalisela iincwadana Clinique.com . Eli iya kuba lixesha lokonwaba kunye namanye amanenekazi athande izithambiso kwaye ufumane ezona mveliso zintle zolusu kunye nohlobo, kunye nendlela ophila ngayo.
Uyenza njani i-obituary engeyiyo eyomsebenzi
Clinique Ukufuma ukuba Ukuqokelela Imicimbi
Ngelishwa, i-Clinique okwangoku ayinikezeli ukhetho kwindawo yabo apho unokucela khona iisampuli zamahhala ngaphambi kokuba uthenge. Nangona kunjalo, bebenjalo ukusebenzisana nabashukumisi beendaba zentlalo mva nje (ngakumbi kwiimveliso zamadoda), ke ukuba unokulandela okuthe kratya kwaye ucinga ukuba uya kuba ulungile, kunokuba kufanelekile ukuzama ukubasondela kwaye ubuze ukuba banomdla kwintsebenziswano yohlobo oluthile.
Akukho siqinisekiso, ewe, sokuba kuya kubakho naziphi na iisampulu zemveliso ezibonelelweyo. Uninzi lwentsebenzo yeemveliso ze-makeup zolu hlobo azihlawulwa, kwaye uClinque usabonakala exhomekeke kakhulu kwintengiso yesiko njengamaphephancwadi kunye namabala kamabonwakude kunendawo yemithombo yeendaba zentlalo. Nangona kunjalo, u-Estee Lauder, inkampani yabazali bakaClinque, unayo Iimpembelelo ezisetyenzisiweyo kwimikhankaso yolunye uphawu ngaphambili.
Qiniseka ukuba uyalandela Iiklinikhi kuFacebook kuba ngamanye amaxesha banikezela ngoncedo olunqongopheleyo lweesampulu zasimahla zeemveliso ezithile. Le yenye indlela yokufumanisa ngeziganeko ezizayo ezikufutshane nawe.
Akukho siqinisekiso sokuba ungayifumana kwisiza esiqhelekileyo simahla, kodwa gcina amehlo akho ejongiwe kwaye undwendwela rhoqo ezinye zeziza eziphezulu ukufumana izinto zasimahla .
Iisampulu zamahala ngokuthenga
Nangona ungasampula ezinye iimveliso ezivela kwimiboniso ngokulula ngaphandle kokuthenga nantoni na, kufanelekile ukuba uqaphele ixabiso leesampulu zasimahla ezenziwa nguClinque ngokuthenga, nazo. Kwiimeko ezininzi, awunyanzelekanga ukuba uchithe imali eninzi kakhulu (ngamanye amaxesha ingaphantsi kwe- $ 30.00) kwaye ufumana ibhegi yezithambiso eneesampulu ezihlala zixabisa ngaphezu kwemali oyichithileyo. Ungazama izinto zokhathalelo lolusu kwiiveki ezidlulileyo (hayi ngeentsuku nje), ezinje ngemascaras, iiglosses, imilebe yomlomo, izithunzi, iziseko, kunye neziqholo. Izinketho zihlala ziboshwe kwixesha lonyaka, ke uya kufumana ukukhanya entlakohlaza kunye ne-sultry shades ekwindla, umzekelo.
Nokuba ukhangela isiseko esigqibeleleyo okanye umtsalane omtsha womlomo womlomo, uClinque ubonelela ngeendlela ezininzi zokuzama iimveliso zabo. Ngokujonga iindlela ezahlukeneyo zokufumana iisampulu zasimahla, ungazama iimveliso ezinomdla kule brand eyaziwayo, kwaye unokufumana nje intandokazi entsha ukongeza kwibhegi yakho yokwenza makeup.
indlela yokususa igrisi epanini
Umtshato Ushishino Uhambo Itafile Linens Ukwaluphala Nje Imiba Ukufakwa Kwetattoo
Amantombazana Akuqhelekileyo Clothing
Ukunyusa Imali Iingcinga
Yonke Into Blogging
Abantwana Clothing Stores
simahla indawo zokukhuphela umculo wehip hop
ndingahamba iminyaka emingaphi
indlela yokumitha intombazana yekhalenda yamaTshayina
indlela yokwenza amehlo aluhlaza pop
indlela yokwenza umthi wemali wepati
njani ukufumanisa ukuba umntu ukuthandana profile
Isifrentshi Isigama Ne Ukuguqulelwa
Impazamo Ekhaya Uphuculo